सुर्खेत – आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ मा अर्ग्यानिक गाउँ बनाउन भन्दै २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । १३ भकारो सुधार, १० कुखुराको खोर सुधार, ३० कम्पोस्ट मल निर्माण गर्ने खाडल, २५ जनालाई अर्ग्यानिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि ५ वटा प्लास्टिक घर निर्माण गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै निर्वाचन क्षेत्र तथा नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य पार्वती सिंहको प्रभूत्व भएकै कारण योजना त्यहाँ छनौट भएको थियो । पञ्चदेवल तरकारी तथा फलफूल उत्पादन कृषक समूहले काम गर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटसँग सम्झौता गर्‍यो ।
सिंहका पति हेमराज सञ्ज्याल समूहको अध्यक्ष बनाइए । समूहले १२ लाख रुपैयाँ पेश्की पनि लग्यो तर काम केही नगरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले काम सम्पन्न नभएसम्म भुक्तानी नदिने निर्णय गर्‍यो ।
सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोही आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत हेमराजकै लगानी रहेको निशान फर्निचर उद्योगमा ४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । केही समय हेमराजले सञ्चालन गरेपनि फर्निचर हाल बन्द रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सोही वडामा धान मेला खानेपानी उपभोक्ता समितिले पञ्चवर्षीय योजना अनुसार हेमराजकै नेतृत्वमा योजना बनिरहेको छ । संघीय सरकारबाट १९ लाख रुपैयाँको बजेट सोही आर्थिक वर्षमा आयो । ट्यांकी राम्रो बनाइएपनि आयोजनाको मुहानमा योजना अनुरुपको काम भने भएको छैन ।
सोही वडामा संघीय सरकारबाट पञ्चदेवल सुधार गर्न भन्दै ७ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । त्यसका अध्यक्ष रत्नबहादुर सञ्ज्याल बनाइए । योजनामा ३ लाख बराबरको काम गरेको र बाँकी रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्रोतको दाबी छ । रत्नबहादुर हेमराजकै आफन्त हुन् ।
कसरी पाए त्यत्रो बजेट ?
हेमराजकी पत्नी पार्वती सिंह साविक एमालेकी जिल्ला कमिटी सदस्य थिइन् । उनी नेकपा कालिकोटको सदस्य समेत छिन् । राजनीति गर्ने र सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीसँग नजिक भएकी हुनाले उनले आफ्नै वडामा बजेट पार्न लगाउने र पति हेमराजलाई त्यसको अध्यक्ष बनाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार राजनीतिक पहुँच भएका कारण हेमराजका नराम्रा गतिविधिविरुद्ध गाउँमा आवाज उठाउने हिम्मत कसैले गर्दैनन् ।
के भन्छन् वडाध्यक्ष ?
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्की अर्ग्यानिक मोडल गाउँको कार्यक्रमबारे जनताबाट बुझ्दा काम नभएको बताउँछन् । ‘२ बोरा सिमेन्ट र केही जस्तापाता केही व्यक्तिलाई दिइएको भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘बजेट के गरे थाहा छैन तर काम यहाँ भएकै छैन ।’ उनले पञ्चदेवल सुधारको काम राम्रो नभएको भन्ने कुरा बारम्बार हेमराजलाई भनेपनि नसुनेको बताए । ‘उहाँहरूले ३ लाख बराबरको काम गर्नुभयो,’ उनले थपे, ‘काम राम्रो भएन भनेर बारम्बार मैले भन्दा पनि अटेर गर्नुभयो ।’
उनले फर्निचर उद्योग केही समय चलाएपनि अहिले बन्द रहेको पुष्टि गरे । ‘हामीसँग उहाँले कुनै पनि सिफारिस लिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई कहाँ काम गर्नुभयो जानकारी नै छैन ।’
राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको दाबी
हेमराज भने आफूले अन्यको भन्दा धेरै गुणा राम्रो काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘अन्यत्रभन्दा मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु र म राजनीति गर्ने मान्छे हो । ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम भयो,’ उनले भने ।
उनले खानेपानी आयोजनाको मुहान आफ्नै नाममा दर्ता भएको बताए । ‘मैले धेरै मेहनत गरेर ३ करोडको खानेपानी आयोजना गाउँका लागि निजी ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेर ल्याएको हुँ,’ उनले भने, ‘काम असाध्यै राम्रो भएको छ ।’
अर्ग्यानिक गाउँ योजनामा कालिकोट कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भरत बस्नेतसँग आफ्नो झण्डै हात हालाहालको स्थिति आएको उनले बताए । ‘अरु सबैको भुक्तानी दिइएको छ । मेरो मात्रै रोकियो,’ उनले भने, ‘मैले केही सामान असारमै गाउँमा पुर्‍याइसकेको छु ।’ उनले कम्पनीमा काम आएको बेला मात्रै फर्निचर खोल्ने गरेको दाबी गरे ।
वडामा अनियमितता भएकोबारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले त्यस्तो भएको भए छानबिन गर्ने बताइन् । ‘हामीले छानबिन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यदि त्यस्तो भएको हो भने हामी रकम फिर्ता गर्न लगाउँछौं ।’ उनले यसबारे सोधखोज गर्न आग्रह समेत गरिन् ।
‘सबै ठाउँमा मन्त्री नै पुग्न सकिने अवस्था छैन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कहीँ त्यस्तो भएको छ भने बाहिर ल्याउनुहोस्, हामी कारवाही गर्न तयार छौं ।’
भदौ १२, २०७६ मा प्रकाशित
कार्यकर्तालाई शपथ खुवाउँदै प्रचण्डले भने– महाकाली नदी नै नेपाल–भारत सीमा चितवन – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताका विषयमा देश एक ढिक्का भएको बताएका छन् । नेकपा भरतपुर महानगर वडा कमिटीको मंगलव...
मंसिर नलाग्दै देशभर बढ्यो चिसो
मेडिकल कलेजको मनपरी : ३ वर्षमा १२ मेडिकल कलेजले गरे पौने ३ अर्ब ठगी